Xiisad Maanta Ka Taagan Magaalada Baardheere ee gobolka Gedo - Awdinle Online
Xiisad Maanta Ka Taagan Magaalada Baardheere ee gobolka Gedo
December 24, 2019 (Awdinle Online) –Xiisad dhanka maamulka ah ayaa Maanta ka taagan Magaalada Baardheere ee gobolka Gedo,kaas oo u dhaxeeya xubno kala taabacsan maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka.
Xiisadda ayaa cirka isku shareertay kadib markii uu maanta Baardheere gaaray nin madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubbaland uu dhawaan u magacaabay guddoomiye ku-xigeenka degmadaas iyo xubno kale oo ka baxay magaalada Kismaayo.
Guddoomiye ku-xigeenka ay degmadaas u magacaawday Jubbaland ayaa waxaa la sheegay in uu xarunta degmada ku soo dhaweeyey Sheekh Maxamed Xuseen isxaaq Alqaadi oo ah guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo.
Galinkii danbe ee shalay ayaa ciidamada Itoobiya iyo kuwa Militeriga Soomaaliya ee ku sugan degmada Baardheere waxay hawada ka saareen is gaarsiinta degmadaas, waxayna magaalada ka bilaabeen howlgallo ay doonayeen inay ku soo qabtaan xubnihii ka socday Jubbaland ee maanta tegay degmadaas.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qalalaaso ka wado gobolka Gedo,halkaasi oo mas’uuliyiintii ka talineysay loo soo kaxeeyay magaalada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin.
Previous articleCabdiraxmaan Cabdishakuur ” madaxweyne Farmaajo waxaa ka muuqda cabsi nafsi ah iyo shaki badan.”
Next articleBangiyada gaarka loo leeyahay oo lagu amray in ay xiraan xisaabaadka Sharikadaha FOREX